महानगरका महायोजना अलपत्र, चिर निन्द्रामा महानगर – श्वेतपत्र
महानगरको गहनाका रुपमा हेरिएका झण्डै दुई दर्जन परियोजना अलपत्र छन् ।
०७२ कार्तिक २५ गते उप–राष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले धुमधामसँग पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यू टावरको सिलन्यास गरे । २९ तले गगनचुम्बी टावरको सिलान्यास गर्न पाउँदा उप–राष्ट्रपति उत्साहित देखिएका थिए । सम्झौता बमोजिम ०७५ भदौमा भवन निर्माण सकिनु पर्थ्यो ।
निर्माण अवधि गुज्रिसक्यो, अझै भवन बन्ने सुरसार देखिदैन । तीन वर्षको अवधिमा त जग पनि पुरा भएको छैन । बसपार्कलाई वरिपरिबाट टिनको पाताले बारेर राखिएको छ । भित्र निर्माण सामाग्री थुपारेको देखिन्छ । अलिअलि काम गरेको झैं पनि देखिन्छ । त्यहाँको बसपार्क खुल्ला मञ्चमा सारियो । तर काठमाडौं महानगरका मेयर, उपमेयर र कर्मचारी नै अझै अनभिज्ञ छन्, भ्यू टावर कहिले बन्नेछ भन्नेमा ।
अहिले भवन निर्माण कार्य ठप्प छ । महानगरको गगनचुम्बी टावर बनाउने काममा ब्रेक लागेको छ । २०६८ असार २६ गतेको नगरपरिषद बैठकले पुरानो बसपार्कमा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बहुउद्देश्यीय टावर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही वर्षको चैतमा ठेक्का आह्वान पनि भयो । जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोइ विल्डर्सले निर्माणको ठेक्का पाएका छन् ।
काम सुरु नहुँदै भवन निर्माणमा प्रश्न उठाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्यो । ०६९ मंसिरमा अख्तियारले भवन निर्माण रोक्न निर्देशन दियो । आयोगले विभिन्न शर्तहरु तेर्साउँदै ०७० वैशाख २४ गते रोक्का फिर्ता गरिदियो । ठेकेदार मनोज भेटवालसँग टावर बनाउने पैसा नभएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा फेरी उजुरी पर्यो । लेखा समितिले नियम र विधि पुर्याएर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले ०७१ फागुन २२ गते ठेकेदार कम्पनीसँग २९ तलाको भवन निर्माण गर्ने सम्झौता गर्यो । २०७२ वैशाख १२ मा राजधानीमा भूकम्प गयो । भूकम्पपछि नयाँ निर्देशिका आयो । शहरी विकास मन्त्रालयले २९ तलाको भवन बनाउन स्वीकृति दिएन । ०७२ भदौमा १२ तलाको नक्सा पास भयो । र, तीन वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो । नक्सा १२ तलाको भएपनि भवनको जग २९ तलाकै बनाउन भनियो ।
मध्यशहरमा बन्ने टावरबाट पर्यटकलाई काठमाडौंको दृश्यावलोकन गराउने उद्देश्य राखिएको छ । टावरमा बस टर्मिनल, होटल, रेष्टुरेन्ट, फिटनेश हल, सेमिनार हल, मल्टिप्लेक्स हल, स्वीमिङ पुल, सपिङ सेन्टर, गेमिङ जोनलगायत सुविधा राख्ने योजना छ ।
लिफ्ट चढेर उक्लिने आधुनिक धरहरा
खुल्लामञ्च, लैनचौर, धर्मपथ, एयरपोर्टमा बहुतले पार्किङ
८ लेनको भित्री तथा बाहिरी चक्रपथ
बाग्मती सम्पदा मार्ग
सुविधा सम्पन्न नयाँ बसपार्क
बिजुली बजार र तीनकुनेमा नेटवर्क आर्क ब्रिज
मेट्रो र मोनो रेल
पशुपतिमा वाटर फाउन्टेन
न्यूरोडमा मल्टिस्टोरी पार्किङ
पुराना दरबार पुनर्निर्माण
काठमाडौं महानगरले भूकम्पबाट भत्किएको रानीपोखरी आधुनिक निर्माण सामाग्री प्रयोग गरेर पुनर्निर्माण सुरु गरिसकेको थियो । रानीपोखरीको बिचमा रहेको मन्दिरको पिल्लरसमेत ठडिसकेका थिए । पुरातात्विक महत्वको मल्लकालिन रानीपोखरी कंक्रिट, सिमेन्ट र छड प्रयोग गरी निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो । व्यापक विरोध भएपछि ठेक्का रद्द भयो । ठेकेदार कम्पनीसँग ०७४ असारमा निर्माण सकाउने गरी सम्झौता भएको काठमाडौं महानगरपालिका सहरी पूर्वाधार विकास विभागका प्रमुख रामबहादुर थापा बताउँछन् ।
महानगरले सुझबुझबीनै निर्माण कार्य अगाडि बढायो । पुरातत्वविद् र सर्वसाधारणले चौतर्फी विरोध गरे । ‘नेपाल सरकार र पुरातत्व विभागको निर्देशनमा काम रोकिएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘नयाँ टेन्डर आह्वान भइसकेको छ, छिट्टै निर्माण कार्य सुरु हुनेछ ।’ सँस्कृती मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीको अगुवाईमा सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिहरु उपस्थित ०७४ चैत २२ गतेको बैठकले विवाद समाप्त गरिसकेको छ ।
मन्दिरको आरसीसी पिल्लर हटाउने निर्णय भयो । मन्दिर र पोखरी पुरातात्विक शैलीमा बन्ने निधो भयो । तर, कहिलेसम्म ? रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा ढिलाई भएपछि नेविसंघले रानीपोखरीमा फुटबल खेलेर सरकारमाथि ब्यंग गर्यो ।
मल्लकालिन आर्किटेक अपनाएर मौलिकता झल्काउने गरी मन्दिर पुनर्निर्माण गरिने थापा बताउँछन् । रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्ने सामाग्री र टेक्नोलोजी पनि पुरातात्वीक हुनेछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा रानीपोखरी तीन वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । ७ महिना वितिसक्यो, बाँकी समयभित्र निर्माण सम्पन्न होला ? विश्वास गरिहाल्न सकिदैन । रानीपोखरीमा ‘म्युजिकल वाटर फाउन्टेन’ बनाउने, वरिपरी गार्डेन र हरियाली पार्क बनाउने योजना छ ।
तीनकुनेमा शान्ती मन्डला जग्गा विवादले रोकिएको छ । काठमाडौं महानगरले तीनकुनेको ५० रोपनी खाली जमिनमा मनमोहक धार्मिक तथा अध्यात्मिक पार्क बनाउन चाहेको थियो । मन्डलाको प्रारम्भिक डिजाइन र थ्रीडी भिडियोसमेत तयार भइसकेको थियो ।थापा भन्छन्, जग्गा विवादले काम अगाडि बढाउन सकिएन ।
तीनकुनेको जग्गामा अझै मुआब्जा विवाद छ । केही व्यक्तिले अझै पनि मुआब्जा बुझेका छैनन् । र, काम गर्न पनि दिएका छैनन् । समस्या समधान नभएसम्म काम अगाडि बढाउन नसकिने उनी बताउँछन् । मुअब्जाको काम सरकारी तहबाटै टुंगिनुपर्ने भएकोले सरकारकै तगरुकता आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।
महानगरले स्थायी पार्क बनाउन नसकेपछि खाली जमिनको संरक्षणमा जुटेको थियो । अहिले खाली जमिन गाडी सिक्ने, कवाडी राख्ने र ठूला गाडीहरुपार्किङ गर्ने ठाउँ बन्दै आएको छ । जमिन संरक्षण गर्न वरिपरी वाकिङ पाथ बनाउने र बिचमा ग्रिनरी बनाउन खोजिएको थियो । यो काममा पनि अवरोध भएको छ ।
तीनकुनेमा पार्क निर्माण गर्न चीनको छेन्दु महानगरपालिकाले चासो देखाएको छ । करीव सवा अर्बजति लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको पार्क निर्माण कार्यमा ब्रेक लागेको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका, पुनर्निमाण प्राधिकरण, सडक विभागले काठमाडौं उपत्यकामा दर्जनौं परियोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाएका थिए । सबैजसो योजना भ्यू टावर, रानीपोखरी र शान्ति मन्डलाजस्तै अलपत्र परेका छन् ।
कतिपय आयोजना निर्माण सुरु भएपछि रोकिएका छन् । कतिपय आयोजना विस्तृत अध्ययन भइसकेर पनि अलपत्र अवस्थामा छन् । कतिपय आयोजना घोषणामात्र गरियो, कामको सिन्को भाँचिएको छैन । तर, सोही समयमा निजी क्षेत्रले घोषणा गरेको आयोजना सम्पन्न भइसकेको छ ।
चन्द्रागिरी केवलकार परियोजना निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको पनि दुई वर्षजति हुन थाल्यो । चन्द्रागिरीको पाँचतारे होटल पनि सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छ । अहिले चन्द्रागिरी देशको गौरवशाली पर्यटकीय गन्तव्य बनिसकेको छ ।
चन्द्रागिरी केवलकार साढे दुई किलोमिटर लामो छ । झन्डै २६ सय मिटर उचाइमा रहेको चन्द्रागिरी डाँडाबाट काठमाडौं उपत्यका पुरै देख्न पाइन्छ । साथै, १८० डिग्रीको रेञ्जमा हिमाल हेर्न सकिन्छ । वरीपरी पहाड, दक्षिणतर्फ तराईको सुन्दर दृश्यावलोकन गर्न पाइन्छ । केवलकार, पाँचतारे होटलसहितको पार्कमा ३ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको लगानीकर्ता चन्द्र ढकाल बाउँछन् ।
भित्री चक्रपथ ढिलोगरी कोटेश्वरबाट कलंकीसम्म विस्तार भएको छ । आठ लेनको सडकले काठमाडौंको मुहार उज्यालो बनाइदिएको छ । पुरै २७ किमी चक्रपथ १० वर्षभित्र विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेपछि दोस्रो चरणको काम सेलाएको छ । पहिलो चरणको काम सकिसक्दा पनि दोस्रो चरणको काम अगाडि बढाउनेतर्फ सरकारले त्यति जोड गरेको देखिदैन ।
०७३ भित्र सिध्याउनुपर्ने १०.९ किमी सडक बल्ल सकिँदै छ । बाँकी १६.१ किमी सडक विस्तार गर्न अझै कति समय लाग्ला ? दोस्रो चरणको विस्तारमा पनि सघाउन चीन इच्छुक छ । सडकको दायाँबायाँ सर्भिस ट्रयाक, डिभाइडर, हरियाली बगैँचा, ९ वटा आकाशे पुलसहित पुरै चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्न १३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
बाहिरी चक्रपथ निर्माणको काम ठप्प छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणले चोभारबाट चक्रपथ विस्तारको प्रकृया सुरु गरेको थियो । तर, काम भने अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । उपत्यकाका तीन जिल्ला जोड्ने यो चक्रपथको अवधारणा १२ वर्षअघि तयार भएको थियो । यो चक्रपथ ७२ किमी लामो हुनेछ । र, ८ लेनको बनाउने बताइएको छ । बाहिरी चक्रपथमा साइकल ट्रयाक, ग्रीनरी बेल्ट, फुटपाथ पनि राखिने छ । तर, निर्माणको अत्तोपत्तो छैन ।
कलंकी–सोल्टीमोडका स्थानिय बासिन्दा सडकमै उत्रिएर तत्काल सडक निर्माण नगरे यातायात ठप्प पारिदिने चेतावनी दिनुपर्यो । त्रिपुरेश्वरदेखि नागढुंगासम्मको सडक विस्तार सुरु भएको वर्षौं भइसक्यो । धेरै ठाउँमा सडक भत्काइएको छ । तर, कालोपत्रे गर्ने सुरसार देखिदैन । धेरैजसो ठाउँमा स्थानियले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेर सडक विस्तार कार्य रोकेका छन् । सम्भवतः सर्वोच्चले सडक निर्माण तत्कालका लागि रोक्न इतिहासमै सबैभन्दा बढी परमादेश जारी गरेको छ ।
यो सडक सरकार, स्थानिय बासिन्दा, सर्वोच्च अदालत र ठेकेदारको चंगुलमा फसेको छ । तर, यही बिचमा माइतीघरदेखि सुर्य विनायकसम्मको सडक ६ लेनमा विस्तार भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्न सडक विभागले त्यति तदरुकता देखाएको पाइँदैन ।
०७२ वैशाखमा भत्किएको धरहरा बल्ल पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जीआईईटिसी रमन जेभीलाई पुरानै डिजाइनमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न धरहरा बनाउन जिम्मा दिएको छ । कम्पनीले ३ अर्ब ४५ करोडमा धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको छ । धरहराको जग खन्न सुरु भएको छ ।
धरहरा पुनर्निर्माणमा यसै पनि ढिला भएको छ । यो परियोजना निर्माण सम्पन्न हुन समय लाग्ने निश्चित छ । किनकी, यो वृहत योजना बनाउन गोश्वारा हुलाक पनि हटाउनुपर्छ । जुन काम सुरु भएको छैन ।
धरहरा पुरानै डिजाइनमा आधुनिक बनाउन लागिएको छ । यहाँवाटर फाउन्टेन, म्यूजियम, थिएटर, आकर्षक बँगैचा, रेष्टुराँ, भूमिगत पार्किङ लगायत सुविधाहरु हुनेछन् । यो धरहरा बाहिरबाट ११ तलाको देखिनेछ । तर, भित्री संरचना भने २२ तलाको हुनेछ । धरहरा चढ्न लिफ्ट राखिने छ ।
काठमाडौं महानगरले खुल्लामञ्च र लैनचौरमा बनाउन लागेको भूमिगत बहुतले पार्किङ रोकिएको छ । त्यहाँ पार्किङ बनाउँदा खुल्ला चउर मासिन्छ । र, जमिनमा पानी रिचार्जहुन पनि पाउँदैन । यो विषयमा मिडिया र जनसाधारणले चौतर्फी आवाज उठाइरहेका छन् । खुल्ला ठाउँलाई खुल्लै छोड्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बताउँदै महानगरका थापाले भने, स्वचालित पार्किङ बनाउन फिजिविलिटी अध्ययन भएको थियो, तर अहिले काम पेन्डिङमा छ । पार्किङ बनाउन खुल्लामञ्चमा तीन अर्ब र लैनचौरमा ७५ करोड लगानीको अनुमान थियो ।
धर्मपथमा भर्टिकल पार्किङ बनाउने काम सुरु गरेको थापा बताउँछन् । तर, यो पनि प्रोसेसिङमै छ । ‘स्वचालित पार्किङ मुल्यांकनकै प्रोसेसमा छ, टेन्डर केही दिनमा टुंगो लाग्नेछ’ उनी भन्छन्, ‘केही टेक्निकल समस्या छन्, निर्माणमा ढिलाई भएको पक्कै हो ।’ समस्या समधान भइसकेको हुनाले चाँडै प्रोसेस टुंगिने उनको दाबी छ ।
थापाथलीको कालमोचन घाटदेखि टेकु दोभानसम्मको साढे २ किलोमिटर क्षेत्रमा सम्पदा पदमार्ग निर्माणमा पनि ढिलाई भएको छ । काठमाडौं महानगरले बाग्मती किनारका सम्पदाहरुको अवलोकन गराउन सम्पदा मार्ग बनाउन खोजेको हो । यो मार्ग धार्मिक पर्यटक, पुराना सम्पदाका पारखी, अध्येता सबैको गन्तव्य हुनेछ ।
काठमाडौं महानगरले हनुमान ढोकादेखि स्वयम्भुसम्म पनि सम्पदा मार्ग विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । थापाका अनुसार सम्पदा मार्गको अध्ययन भइरहेको छ, २/३ महिनामा खाका तयार हुन्छ । नेपाल भ्रमणमा आउने साँस्कृतिक पर्यटकका लागि यो पदमार्ग गतिलो गन्तव्य हुने महानगरको ठहर छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा सिटी अर्वान केवलकारको योजना सेलाउन थालिसकेको छ । केवलकारको प्रारम्भिक रिपोर्ट आइसकेको छ । फ्रान्सका दुई कम्पनीले लगनखेल–जमल, टंकेश्वर–गोंगबु, कलंकी–रत्नपार्क र बौद्धनाथ–विष्णुमतीमा केवलकार सञ्चालन गर्न सकिने रिपोर्ट निकालेका थिए । यो परियोजना बनाउन अझै लगानीकर्ता भेटिएका छैनन् । यदि, केवलकार बनेमा महानगरको स्वरुपमा परिवर्तन हुने थियो ।
स्थानिय तहको चुनावमा निर्वाचित हुने वित्तिकै काठमाडौंका मेयर विद्या सुन्दर शाक्य र ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले २/३ वर्षभित्र उपत्यकामा मेट्रो/मोनो रेल कुदाउने घोषणा गरे । दुबैजना मेयर भएको पनि दुई वर्ष पुग्न थालिसक्यो, कहाँ पुग्यो रेल कुदाउने योजना ?
महानगरका कर्मचारी भन्छन्, केही समय अगाडि प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो, मोनो रेल चलाउन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाउने प्रकृया बल्ल अगाडि सरेको छ । केही दिन अघिमात्र चिनिया कम्पनीसँग डीपीआर बनाउने विषयमा सम्झाैता भएको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले नै रिङरोडमा फिजिविलिटी अध्ययन गरेर रेल कुदाउन सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो । महानगरका थापा भन्छन्, चीनले प्रारम्भिक अध्ययनमा काम सुरु गरेको तीन वर्षमा रेल कुदाउन सकिने बताएको थियो । अझै आधाभन्दा बढी रिङरोड विस्तारको काम नै सुरु भएको छैन । काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउने बहस पुरानो भइसक्यो । अझै पनि बहसै भइरहने पक्कापक्की छ ।
ललितपुरका मेयर चिरिबाबुले पुल्चोकदेखि थापाथलीसम्म १.४ किलोमिटर सडकमा फ्लाई ओभर बनाउने घोषणा गरेका थिए । यो पनि घोषणामै सिमित छ । सडकमा सोलार स्ट्रिट लाइट जडान गर्ने काम पनि रोकिएको महानगरका थापाले बताए । ‘सोलार लाइट राख्न पनि महंगो, मेन्टेनेन्स खर्च झन महंगो रहेछ’ उनी सुनाउँछन, ‘अब त लोडसेडिङ हटिसक्यो, बिजुलीकै वत्ती राख्नुपर्छ ।’
सडकमा ट्राफिक लाइट राख्ने कामले पनि गति लिएन । शहरका मुख्य सडक र चोकमा बिजुली, फोन, इन्टरनेट, केवलका तारहरु अन्डरग्राउन्ड गर्ने भनिएको थियो । यो काम पनि चिरनिन्द्रामा छ । बिजुली बजार र तीनकुनेमा नेटवर्क आर्क ब्रिज बनाउने भनिएको थियो । बिजुलीबजार पुलमा त ढिलै भएपनि काम हुँदैछ । तर, पप्पु कन्स्ट्रक्सने ठेक्का लिएको तीनकुनेको पुल निर्माण कछुवा गतिमा छ ।
काठमाडौंका मेयर शाक्यको योजना थियो, संम्पदा संरक्षण, व्यवस्थि पार्किङ, चुस्त चक्रपथ विस्तार, केवल बसको सम्भाव्यता अध्ययन, सम्पूर्ण ट्राफिक लाइट मर्मत, ‘क्लिन दि सिटी’, निःशुल्क वाईफाई, फोहोर व्यवस्थापन, स्मार्ट सिटीको पूर्वाधार निर्माण प्रारम्भ गर्ने र शहरलाई चौबिसै घण्टा जीवन्त राखिने छ । तर, ति योजना सायद महानगरको आगामी निर्वाचनमा पनि दोहोरिनेछन् ।
४ चैत्र २०७५, सोमबार ११:०६ मा प्रकाशित
Related Topics:चिरिबाबु महर्जनमहानगरमेयरविद्यासुन्दर शाक्य